Isbahaysiga Sacuudiga Oo Duqeeyay Idaacad ku Taala Magaalada Hodeida Ee Dalka Yemen. – Heemaal News Network
Duqayn ay isbahaysiga Sacuudiga ay ka gaysteen magaalada dekada leh ee Hodeida ayaa waxa uu haleelay xarun idaacad oo halkaasi ku taalla.
Kooxda mucaaradka ee Xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen 4 qof oo rayid ah.
Balse isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa waxa ay dhankooda sheegeen in dhismahaasi uu ahaa mid xarun u ahaa mucaaradka Xuutiyinta.
Waxa ay isbahaysiga intaa ku direen in ay duqeeyeen bartilmaameed militari oo uu hadafku ahaa.
Dowladda Yemen iyo isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa waxay muddooyiinkii ugu dambeeyay wadeen duqaymo ay ku doonayeen in ay dib ugu qabsadaan magalada Hodeida.
Qaar ka mid ah weerarada ay fuliyaan isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa waxaa ka dhashay muran ka dib markii sida la sheegay lala bartilmaameedsaday goobo ay rayidka ku badan yihiin.
Weeraradaasi mid ka mid ah ayaa waxa uu ka dhacay suuq ku yaalla magaalada Hodeida halkaasi oo ay ku dhinteen dad ay caruur ku jiraan.
Waxaa jira walaac laga qabo in dagaalkan uu hakad ku keeno howlaha dekadda magaalada Hodeida.
Dekadda magaalada Hodeida ayaa wax ka soo daga gargaarka bina’aadanimo ee Yemen loogu talagalay.
Qaramada Midoobay ayaa horey uga digtay dagaal xooggan oo ka dhacay magaalada Hodeida in uu sababi karo dhibaato bina’aadanimo.